COVID bvunzo nzvimbo inovhura kuBelfast City Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » COVID bvunzo nzvimbo inovhura kuBelfast City Airport
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • Investments • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Technology • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iyo yekuedzwa centre inopa inokurumidza uye inodhura PCR uye antigen (lateral kuyerera) bvunzo
Kuvhura kwenzvimbo kunoenderana nekutangazve kwendege dzenyika kubva kuBelfast City Airport
Ndege dzatangazve nhasi kubva kuBelfast City kuenda kuAmsterdam Schiphol Airport
Bvunzo, idzo dzinofanirwa kunge dzakafanogoneswa, dzinowanikwawo kune vasiri-vanobhururuka nhengo dzeveruzhinji
George Best Belfast City Airport nhasi yavhura nzvimbo nyowani yekuongorora yeCOVID-19 nekambani inotungamira yepasirese diagnostics, Randox.
Iyo test centre, chinangwa-chakavakwa nekutungamira Belfast chivakwa chakasimba H & J Martin, inopa inokurumidza uye isingadhuri PCR uye antigen (lateral kuyerera) bvunzo, nekuvhurwa kwayo kunoenderana nekutangazve kwendege dzenyika dzese kubva kuBelfast City Airport.
Airport Operations Manager, Judith Davis, akatsanangura kuti:
“Ndege dzatangazve nhasi kubva Belfast Guta Airport kuenda kuAmsterdam Schiphol Airport pamwe nemumwe wedu wenhandare KLM, iri rimwe danho rakanaka sendege pasi rese kuvakazve uye kutangazve iwo maratidziro.
“Parizvino Hurumende yeDutch inoda kuti vese vanopinda muNetherlands vatore ndokudzosa mhedzisiro yakaipa kubva kuPCR uye kuedzwa kweantigen (lateral flow). Kupa sevhisi panzvimbo ino ndiko nyore kwazvo kune vatakakwira, chinova chinhu chatinozvirumbidza nacho uye chatinoramba tichiedza kusimudzira. ”
PCR bvunzo uye antigen bvunzo naRandox inowanikwa kuBelfast City Airport. Judith ane ruzivo rwekuwedzera mabhenefiti ayo anopa vanhu vekuNorthern Ireland.
“Bvunzo idzi, dzinofanirwa kunge dzakafanobhadharwa, hadzisi kungochengeterwa vafambi vanobhururuka kubva kuBelfast City Airport asi zvakare dzinowanikwa kune vanhu vasiri kubhururuka veruzhinji.